Zuva Nezuva Munamato We Pfungwa Uye Mimba | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Munamato wezuva nezuva wePfungwa Uye Nhumbu
1 Johani 5: 14-15:
14 Uye uku ndiko kuvimba kwatinako maari, kuti, kana tikakumbira chero chinhu maererano nezvaanoda, anotinzwa. 15 Uye kana tichiziva kuti anotinzwa, chero chipi chatinokumbira, tinoziva kuti tine izvo zvichemo izvo isu taida kwaari.
Vana inhaka yaIshe uye muchero wechibereko mubairo waMwari muchato, Mapisarema 127: 3. Mwari pavakasika munhu, chikomborero chekutanga chaVakapa pamunhu ndechekuti murume abereke, Mavambo 1:28. Izvi zvinoreva kuti semwana waMwari, hautenderwe kusava nezvibereko. Mwari akakusika uye akataura kuti iwe bereka, hapana dhiabhori anogona kuzvichinja Nhasi tichave tichitarisa pamunamato wezuva nezuva wekubata nhumbu, iyi minamato inokupa simba rekuti urwe hondo yakanaka ine chekuita nekubereka kwako. Kushaya mbereko hakusi kwaMwari, its an anomaly yakaiswa mumuviri wako nadhiyabhorosi. Izvo hazvina basa nemazita ekurapa anoshevedzwa nachiremba mamiriro ako, ingo ziva kuti hazvisi zvaMwari nekudaro zvinofanirwa kudzimwa mumuviri wako muzita raJesu.
Kubereka chibereko Kodzero yekuzvarwa kwemwana wega wega waMwari, iko kuda kwaMwari kuti imba yako ikomborerwe neVana. Nekudaro, dhiabhori anogara aripo kuti ashatise maropafadzo aMwari. VaKristu vazhinji nhasi varikunetseka kuva nevana vavo nekuda kwemadhimoni maniplication. Uku kudhimoni kwemadhimoni zviitiko zvevaroyi nevaroyi, masimba echiSatan anomira kumisa vana vaMwari kuti vabate. Vatendi vazhinji vakabatirirwa mudenderedzwa rekusingaperi kuora mwoyo nekuti chibereko chavo chakabiwa mumweya, vamwe vatendi havagone kuitawo nhumbu nekuti mudenga remweya ivo vakateedzera vana vavo vese, vamwewo vatendi havangave nevana nekuti vanenge vabatwa vakadzi vemweya nevarume vemweya, vane vana vazhinji muumambo hwemakungwa, asi ivo vasiri munzvimbo yemuviri. Vamwe maKristu havana zvakare mwana nekuda kwezvivi zvekare, zvivi zvakaita kubvisa nhumbu uye chipfambi nekuda kweizvi ivo vanga vatukwa kana kuti ivo vakarasikirwa ipapo chibereko mudhara.
Zvekufungidzira zvese izvi zvichadzimwa nhasi patinoita minamato iyi yemazuva ese. Munamato uyu wezuva nezuva wekubata pamuviri uye nepamuviri uchaunza ruoko rwaMwari pahupenyu hwako, nyangwe chikonzero chekusabereka kwako, Mwari vachakununura uye iwe uchatakura vacheche vako gore rino muzita raJesu. Asi tisati tapinda mumunamato uyu wekubatira pamwe nepamuviri, pane mamwe matanho ekutenda aunofanira kuita kuti uone chibereko chako chakavimbiswa. Isu tichapfuura nepanhanho idzi imwe mushure meimwe.
Matanho Ekutenda Kune Pfungwa dzako.
1). Tenda Muna Mwari WePfungwa: Mutumwa Gabrieri akaudza Erizabheti muna Ruka 1:45, Iye akadaro "Wakakomborerwa iye unotenda, nekuti zvichaitika kuti zvataurwa kwaari zvaIshe." Mwari wedu Mwari wekutenda, izvo zvausingatende, Mwari haakwanise kuita muhupenyu hwako. Iwe unofanirwa kuita iyi minamato nekutenda muna Mwari weKubata. Tenda Mwari nesainzi yekurapa, asi kana mudzi wekusabereka kwako uri wemweya, hapana chiremba pasi rino anogona kukubatsira. Kuti uone Mwari vachiita zvishamiso zvavo zvekubata minana muhupenyu hwako, unofanira kutenda maari. Sezvo iwe uchitenda muna Mwari wekubata, iwe uchave nemimba muzita raJesu.
2). Taura Kufunga: Marko 11: 23-24, inotiudza kuti kana tikataura kumakomo edu mukutenda, tichava nezvatinotaura. Usashandise muromo wako kuparadza chishamiso chako. Iwe unofanirwa kudzidza kufamba nekutenda uye kufamba nekutenda zvinoreva kutaura nekutenda. Pese paunomuka mangwanani tenda Mwari nekuda kwevana vako, kana mumwe munhu akubvunza, ko vana vako vanovaudza sei, "vana vangu vakanaka" zvitaure iwe saamai vevana. Usataure mazwi anoti, Ini handabereki, handigone kuita vana, dumbu rangu rakakuvara, handina chibereko, Mwari ngavarambe, dzivisa uye ramba mazwi akadaro, pachinzvimbo uti, Ini ndiri kubereka, ndiri amai vevana, wangu nhengo dzokubereka nadzo dziri kushanda mushe, vana vangu vanokomberedza tafura yangu. Izvo zvaunotaura ndizvo zvaunoona, saka usataure zvaunoona, asi taura zvaunoda kuona. Rangarira hupenyu nerufu zviri musimba rerurimi.
3) Tanga Kutenga Machira evana: Hongu unoverenga zvakanaka. Kutanga kutenga machira evacheche. Kana iwe uri kutenda kuna Mwari kwemapatya, tanga kutenga imomo machira uye kugadzirira vana vako. Ichi chiito chekutenda. Anotarisirwa ndiamai vekuratidzwa, izvo zvausingafungire, haugone kuratidza. Saka isa kutenda kwako kushanda, tanga kugadzirira vana vako vasati vasvika uye ivo vanosvika zvechokwadi muzita raJesu.
4). Ramba Uchinamata: Ramba uchinamatira kuti ubate pamuviri, usamire kunamata, namata usingaregi, usarase kuna Mwari, nekuti Mwari havambokusiya. Pese paunomuka uchinamata, zvishamiso zvako zvinosvika padhuze kupfuura zvaunofunga. Kunamata kunoita kuti masimba makuru edenga awanikwe kwauri. Zvakare kana iwe uchinamata, iwe unoparadza ese mabasa edhiabhorosi achirwisa nepamuviri pako, zvese strongman mudzimba dzababa vako kana amai veimba dzichaparadzwa nesimba reminamato. Kana isu tikanamata, isu tinotora iyo hondo kuenda kumusasa wevavengi uye tinoparadza zvirongwa zvavo uye tinotora zvese zvavakabira kwatiri.
5) Ipa Mwari Kutenda: Muzvinhu zvese, ipai Mwari kutenda, 1 VaTesaronika 5:18. Tinofanira kutenda kuna Mwari nguva dzose tichiziva kuti ndiye muiti wezvinhu zvese.Thanksgiving Kuda kwaMwari kwatiri, uye kana isu tichitenda Mwari nekuda kwekupindura minamato yedu, tinomupa kuti aite izvo zvatakakumbira kwaari. Kutenda chiitiko chekutenda uye chinofanira kuitwa kubva pamoyo apo iwe uchiisa rutendo rwako kubasa, ramba uchipa Mwari kutenda kunyangwe uchiri kuona mashura ako, ramba uchingomutenda uye uchaona runako rwake muhupenyu hwako muhupenyu Zita raJesu.
Sezvo isu tichipinda mumunamato uyu wekubatira pamwe nepamuviri, ndinoda kuti uzive kuti Mwari vanokuda zvisizvo uye Vanozokupindura nekukurumidza. Namata uyu minamato nemoyo wako wese uye ini ndiri kukuona iwe uchitakura vako vana vezvishamiso zvinoenderana nemoyo wako zvishuwo muzita raJesu.
1. Ndinoreurura nekutendeuka kuzvivi zvekuteura ropa, zvakaitwa mumazuva angu ekusaziva, muzita raJesu.
2.Ishe Jesu, geza, zvivi zvangu zvekare uye nemhedzisiro yavo.
3. Baba ndinokutendai nekuisa kwandiri vana ava.
4. O Mwari, zadzisa zvipo izvi mandiri, muzita raJesu.
5. Vacheche vangu neni takagadzirwa nekutya uye zvinoshamisa, muzita raJesu.
6. O Mwari, simuka munditungamirire murwendo urwu rwekuzvara vana zviri nyore, nenyasha uye nemutsa une rudo, nezita raJesu.
7. Sezvo ini pandinoona kusikwa, uye nekushanduka kwemanzwiro, ita kuti mufaro Wako uve simba rangu, muzita raJesu.
8. Baba ngavakudzwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
9. O Mwari, simukai zvinoenderana naJeremia 29:11, uye ndipei mugumo unotarisirwa wechengeteko nemufaro, muzita raJesu.
10. Ndinozvidzivirira neemvuropu yemoto waMwari, kure nevanoona zvakaipa nevatariri vakaipa, muzita raJesu.
11.Haiwa Mwari, ndipeiwo hanya yekudenga nekusimudzira mwana wangu zvakanaka, muzita raJesu.
12. O Mwari, garai muchinditungamira munzira iyi yese yekuzvitakura, muzita raJesu.
13. Nengoni dzako, Mwari, ndisunungurei pamwe nevacheche kubva pakukohwa kwese mhodzi dzezvakaipa dzakadyarwa munguva yakapfuura, muzita raJesu.
14. Mwari, regai mhosva yangu ibudirire, muzita raJesu.
15. Iwe wakandibereka, ndivandudze, muzita raJesu
16. Ini ndinoporofita kuti zvinhu zvese zvinofanirwa kushanda pamwechete kuti zvindinakire, muzita raJesu.
17. Ndinosunga mweya wese wekukanganisa, muzita raJesu.
18. Semwana wemweya waAbrahama, ini ndine chibereko uye ndinowanda, muzita raJesu.
19. Chibereko changu (vacheche / nhumbu) chinosimbiswa kwazvo uye hachizo kurasika isati yasvika nguva yekuzvara, muzita raJesu.
20. Vana ava vachashandira chinangwa chaMwari chekuti ndiwande uye ndikunde nyika, nemuzita raJesu.
21. O Mwari, ndinunure kubva pakurwara mangwanani uye chero complication, muzita raJesu.
22. Ini ndinomira kupokana nehurema chero hupi hwekuzvarwa muvacheche vangu uye ndinokumbira kukwana kwavo, muzita raJesu.
23. O Mwari, shungurudza chero chiito Haudi kuti nditore, muzita raJesu.
24. O Mwari, uyai nebasa rakanaka Ramakatanga mandiri mugumo rine mbiri, muzita raJesu.
25. Ini ndinoti kukura kwakakodzera uye kukura kwevacheche vari mudumbu, uye kuchengetedzeka kwemwana uye neni panguva yekuzvara, muzita raJesu.
26. Tarisiro dzangu hadzingabviswe, muzita raJesu.
27. Ini ndinoparidza nhasi kuti mumwedzi mipfumbamwe inotevera, ndichatakura vana vangu muzita raJesu.
28. Ini ndinogashira vhezheni inosimbisa yekusimbisa kodzero yangu yekubata, muzita raJesu.
29. Chero kusanzwisisika munhengo dzangu dzekubata uye kubata pamuviri, ndinogamuchira kururamisa kwaMwari, muzita raJesu.
30. Wese akasarudzika ezvirongwa zvekurapa, shandurwa uve wakanaka, muzita raJesu.
31. Ropa raJesu, bvisa chero satanic dhiva rangu muchibereko changu, muzita raJesu.
32. Ini ndinovhara mushonga wese kana jekiseni randakapihwa neropa raJesu.
33. Chizvaro changu, iva nzira inozivisa yekubvisa, muzita raJesu.
34. Ini ndinoraira ruoko rwese, mubhedha wega wega uye muedzo wese neropa raJesu, uye nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
35. Wese satanic mugwagwa-wakavharirwa, unokwira pamusoro pekusimudzira nhumbu, woputswa nemoto, muzita raJesu.
36: Chero chipi chinhu chandiri kuenda kuchishamiso chekubata kwepanyama uye kuberekwa, buda pachena neropa raJesu.
37. Chizvaro changu uye chipfuva, tanga kushanda sezvakarongedzwa naMwari, muzita raJesu.
38. Iwe simba rekusika raMwari, famba mudumbu rangu nemoto wako, muzita raJesu.
39. Ndinobvisa chibereko changu kubva paatari yakaipa yese, muzita raJesu.
40. Mbeu yega yega yekubata nhumbu mukutadza kwangu, kufa, muzita raJesu.
41. Kwese kushandurwa kwaSatani kana kuchinjanisa dumbu rangu, kufa, muzita raJesu.
42. Ini ndinosunga uye ndinodzinga mweya yega yega yekutadza mumabatiro ese, muzita raJesu.
43. Shoko rega rega, rakataurwa nemuvengi kupesana nepamuviri wangu, moto wemashure, muzita raJesu.
44. Chero muti wakaipa, uchikura mumhuri medu urikushanda uchirwa neni, unofa, muzita raJesu.
45. Chero kutuka, kusimbisa muvengi weyenhumbu yangu, kufa neropa raJesu.
46. ​​Wese murume akasimba, anotarisira chiberekero changu kusunga vana, vofa, muzita raJesu.
47. Nesimba rinogovanisa Gungwa Dzvuku, ndinowana vacheche vangu nemoto, muzita raJesu.
48.Mweya Mutsvene, ita chiberekero changu chakanakira kubereka, muzita raJesu.
49. Ndinosunga nekusunga hutachiona hwese, muzita raJesu.
50. Ropa raJesu, nyaradza izvo zvinotevera-zvese zvinodhaka zvinogamuchirwa pandiri, muzita raJesu.
51. O Ishe, ndigadzirirei nzira apo pasina nzira, muzita raJesu.
52. Ini ndinotyora chero chibvumirano pakati pangu nemurume wese kana mukadzi akaipa, muzita raJesu.
53. Chero yenguo dzangu, idzo muvengi akaisa parutivi kutambudza kubata kwangu, kugocha, muzita raJesu.
54. Uta hwega hwevane simba, uchirwa nekubereka kwangu chibereko, gura, gura, gura, muzita raJesu.
55. Chero chipi zvacho chakashongedzwa chiri mumba mangu chakatorwa, haiwa Ishe, ndizivisei.
56. Ini ndinoparadza, chero ibwe rakaipa kana mbudzi, ndichiparadza vana vangu nepamuviri, muzita raJesu.
57. Chero nguo, iri kushandiswa nemuvengi kuparadza nhumbu yangu, rova ​​muna Jesu.
58. O Ishe, regai mhepo yenyu yakasimba yekumabvazuva ivhuvhuvhuze yakatarisana neGungwa Dzvuku mudumbu rangu izvozvi, muzita raJesu.
59. Chese chamadhimoni chishandiso chakashanda, parutivi kubvisa nhumbu yangu, gura-gura, muzita raJesu.
60. O Ishe, kurwa nomuparadzi, kushanda kurwisa wangu kuwedzera uye muchero, muzita raJesu.
61. Wese chiremba / mukoti wedhimoni, akapihwa basa nasatan kuti aparadze nhumbu yangu, jekiseni kufa, muzita raJesu.
62. Ropa raJesu, ndishambidze ugondinzwira ngoni, muzita raJesu.
63. Yese yakaipa yekudzivirira remote gadget iri kushandiswa kubata nhumbu yangu, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.
64. Iwe murume wehondo, ndiponese kubva mumaoko evanyamukuta vakaipa, muzita raJesu.
65. Ini ndinopa chero chombo chakagadzirirwa kushaya nhumbu yangu simba, muzita raJesu.
66. Ah Ishe, pfuurai muIjipita wese anoshanda achindirwisa mukati megungwa, muzita raJesu.
67. Ini ndinovhara pese panhepfenyuro yesatani, yakagadzirirwa kupokana nepamuviri wangu, muzita raJesu.
68. Ini ndinoporofita kuti ndichaona iro basa guru raIshe pandinonunura vana vangu ndakachengeteka, muzita raJesu.
69. Ini ndinoramba kubata chero mhondi nhumbu, mune chero department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
70. Mabhiza ese nemutasvi waro ari mudumbu rangu, mhuri kana hofisi, akakandwa mugungwa rekukanganwa, muzita raJesu.
71. Ndinosunga mweya wega wekukanganisa wakapihwa nhumbu yangu, muzita raJesu.
72. O Ishe, tumai Chiedza chenyu pamberi pangu kuti chityaire zvakashata kubva mudumbu rangu nehupenyu, muzita raJesu.
73. Ini ndinosunga mweya weanenge aripo; Hauzoshande muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
74. Ndinodzinga simba rega rega kudzinga vana vangu, muzita raJesu.
75. Ini ndinotyora kubatwa kwese nekubata kweuroyi pamusoro pemimba yangu, muzita raJesu.
76. Kubva nhasi, handisi kuzorasa mwana wangu mudiki, muzita raJesu.
77. Ini ndinoporofita, kuti ini ndinomesa simba rose kupokana nepamuviri wangu, muzita raJesu.
78. Ndichazadzisa iyo mazuva mazuva ekuzvitakura uku, muzita raJesu.
79. Chero nhengo yemhuri yangu, inomhan'arira nhumbu yangu kune vakaipa, gamuchira mbama dzevatumwa vaMwari, muzita raJesu.
80. Handisi kuzobvisa nhumbu yangu ndisati ndasununguka, muzita raJesu.
81. Dhimoni rese redunhu, ririkushanda kumuchato wangu, gashira moto unotinhira waMwari, muzita raJesu.
82. Wese mweya wekubereka uye wekutyisidzira kubvisa nhumbu, wapedzwa nemoto, muzita raJesu.
83. Ini ndinobvisa zvese satanic kutyisidzira pamusoro pemimba yangu, muzita raJesu.
84. handingabereke mhondi, muzita raJesu.
85. Simba rega rega / mweya unondishanyira usiku kana muchiroto, kuti ndipedze nhumbu yangu, kuwa pasi uye kufa, muzita raJesu.
86. Simba rose remhondi, rinopaza, muzita raJesu.
87. Ini ndinobvisa zvakaipa zvese zvekushanyirwa naSatani pamimba yangu, muzita raJesu.
88. O Ishe, ndinunurei kubva mudumbu rinokuvadza, muzita raJesu.
89. Iwe plug dumbu rangu, gamuchira simba reMweya Mutsvene kutakura nhumbu yangu kusvika pakuzvara, muzita raJesu.
90. Chero mhirizhonga yekusagadzikana, mira zvachose, muzita raJesu.
91. Ini ndinoramba kuratidza kwese kwefivha panguva yekuzvitakura, muzita raJesu.
92. Simba rose rakaipa, rinoonekwa kuburikidza nembwa, murume kana mukadzi, richaparadzwa nemoto, muzita raJesu.
93. Ini ndinoramba kushushikana kwese kwasatani panguva yekuzvitakura, muzita raJesu.
94. Imi vana vakaipa, kukonzera kubvisa nhumbu, kufa, muzita raJesu. Ndasunungurwa kubva pakumanikidzwa, muzita raJesu.
95. Ini ndinotema rufu rwemweya wega wega murume kana mukadzi wemweya, kuuraya vana vangu, muzita raJesu.
96. Iwe nyika, ndibatsireiwo ndikunde kukunda simba rekushaiwa misumbu, muzita raJesu.
97. O Ishe, ndipeiwo mapapiro egondo guru kuti nditize kubva pakubata zvisizvo, muzita raJesu.
98. O Ishe, ndipeiwo murume-mwana, Muzita raJesu.
99. Ini ndinoparidza kuti ini ndine chibereko uye ndichaunza nerunyararo, muzita raJesu.
100. Ini ndinokunda kubuda pamuviri nesimba raIshe, muzita raJesu
Ndatenda Jesu nekuda kwechishamiso chekubata kwangu zita raJesu.
Previous nyaya70 Husiku Munamato wekubudirira SaMufundisi
inotevera4 Mazuva Ekutsanya Uye Munamato weKuroora Kwemuchato
Afua Chivabvu 17, 2020 nenguva dza 11:06 pm
Yako saiti yave iri chikomborero chakakura kwazvo kwandiri. Ndatenda Mwari nehupenyu hwenyu
John Kukadzi 18, 2021 At 1:47 pm
Må Jesus Kristus ge oss en välsignelse, Ameni!
Babra Kurume 27, 2021 Pa 2: 16 am
Ndinokutendai Ishe ndakasunungurwa
Kunamatira Kubatsira Uye Kutungamira
Mapisarema 22 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
50 ndima bhaibheri mavhesi nezve kururama kjv